Vakinankaratra : maro ny tetikasa ho an’ny faritra. | NewsMada
Vakinankaratra : maro ny tetikasa ho an’ny faritra.
Par Taratra sur 20/01/2016
Naharesy lahatra ny minisitry ny Indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina, Rafidimanana Narson, sy ireo mpiara-miasa aminy ny fahavononan’ny faritr’i Vakinankaratra tarihin’ny filohany, Andrianjanaka Mandrindra Albert. Miroso izy ireo ho amin’ny fampandrosoana ny faritra sy ny tontolo ambanivohitra ao aminy. Tsapa izany taorian’ny dinik’asa ho an’ny fampandrosoana, nandritra ny fitsidihan’ny minisitry ny Indostria tao Antsirabe ny 14 janoary lasa teo.
Nambaran’ny lehiben’ny faritra, nandritra izany fotoana izany ny hotanterahina ao Vakinankaratra mandritra ity taona 2016 ity. Voalohany, ny fambolena katsa-potsy manara-penitra amina velaran-tany midadasika, fiaraha-miasa amin’ireo mpandraharaha avy any Afrika Atsimo. Miara-miasa amin’ny faritra momba izany ny Fifamanor, sampana fampandrosoana ny faritra (DRDR) sy ny hafa.
Faharoa, fanomezana velaran-tany ho an’ireo sokajin’olona mampiasa milina madinika miasa any amin’ny tontolo ambanivohitra. Homena hofain’izy ireo ny velaran-tany midadasika na « Zone d’investissement agricole ».
Fiarahan’ny faritra telo
Fahatelo, fananganana ny “Centre interregional d’appui technologique Meva”, ivondronan’ny faritr’i Vakinankaratra, Amoron’i Mania ary Menabe. Rafitra atao hikotrehana orinasa madinika hamokatra fihariana vaovao. Hanampy azy ireo ny Antenimieran’ny varotra telo sy ny fandaharan’asa Matoy. Hisokatra amin’ity taona 2016 ity ihany koa ny sehatra ho fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra natokana ho an’ny tanora. Homena velaran-tany hatrany amin’ny 5 ha izy ireo.